Zava-mahadomelina! Arovy ny ordinatera amin'ny seminera
Ny bot dia fampiharana rindrambaiko izay manatanteraka asa eo amin'ny baolina toy ny fanondroana fikarohana s. Ny botsika dia tsara indrindra amin'ny fanatanterahana asa miverimberina. Na dia izany aza dia azo ampiasaina amin'ny teboka ratsy ataon'ny mpampiasa cyber, toy ny fanaraha-maso ny solosaina finday. Ny Botnets dia tamba-jotra solosaina mifandray mivantana (asa manokana).
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia mampiasa botnets toy izao ny cyberkriminaly:
Mandefa mailaka mailaka na tetikady hafa.
Ireo mpampiasa mpampiasa mba hahazo ny volany sarotra.
Manome tompona tranonkala iray ahazoana vola avy amin'ny "klikan'ny hosoka".
Botnets koa ny bitcoins
Manomboka ny fandàvana ny fanafihana an-tserasera amin'ny mpampiasa na vohikala sasany.
Mangataka vola avy amin'ny tompon'ny tranonkala ny mpisoloky amin'ny aterineto ho takalon'ny fanavaozana ny solosaina na ny tranonkala..Ireo mpiserasera amin'ny aterineto ihany koa dia mampiasa botnets mba hametrahana karazana tranga tsy ara-dalàna. Ohatra, ireo mpanao heloka bevava dia mampiasa botnets mba hampidirana tranonkala iray miaraka amin'ny fifamoivoizana amin'ny fampiasana ordinatera marobe, noho izany, mandresy ny tranonkala ary manao azy io ho tsy mahomby sy miadana, na koa manao ny tranonkala tsy azo hozongozonina amin'ireo mpampiasa izay te-hitsidika azy. Botnets dia ampiasaina mba hizara viriosy sy spyware amin'ny ordinatera. Mangalatra fampahalalana manokana sy tsy miankina amin'ny solosaina izy ireo, toy ny carte de crédit toy ny carte de crédit, ny tenimiafina sy ny fahazoan-dàlana amin'ny banky eo anivon'ireo fampahalalam-baovao mahaleo tena ary mampiasa azy io mba hangalarana ny maha-izy azy, hahazo ny fampindramam-bola na hividianana vokatra amin'ny anaran'ny mpampiasa
Na izany aza, matetika ny botnets dia manafika solosaina hita maso, misy toro-hevitra maromaro izay azo ampiasaina mba hiarovana ny bots, na farafaharatsiny hampihena ny loza mitatao. Ireto ambany ireto ny toro-hevitra sasantsasany omen'i Jack Miller, Semalt Mpitarika Success Success Manager:
Mametraka tambajotra fiarovana tsara indrindra, toy ny Norton Internet Security. Ity rindrambaiko ity dia ilaina amin'ny fahitana sy ny fanakanana ny malware, noho izany, misakana ny fidirana amin'ny solosaina tsy ilaina.
Tokony havaozina ny rindrambaiko ampiasainao, ary azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fanoratana ny solosaina
amin'ny rindrankajinao mba handrosoana automatique.
Ampitomboy ny safidin'ny safidin'ny browsers.
Ataovy azo antoka fa mijery tranonkala azo antoka ianao.
Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fifintonana amin'ireo tranonkala fantatrao aminao sy ireo pejy web izay miseho eo amin'ny pejy vitsivitsy voalohany amin'ny valin'ny fikarohana. Aza misalasala manindry ny fandefasana afa-tsy ny fanamarinanao ny loharanony, indrindra amin'ny mailaka spam. Botnets dia mandrisika ny mpiserasera handefa rindrambaiko maloto ary mamitaka ny mpampiasa mba hamindrana ny malware amin'ny ankapobeny amin'ny fanokafana fifandraisana maloto. Amboary ny rafitra fiarovana an-tserasera mba hizara automatique, mba hahazoana antoka fa manana hatrany ny fanavaozana farany rafitra Source .